Accueil > Gazetin'ny nosy > Asa: Mpiasam-panjakana 20 000 mahery no tapaka karama
Asa: Mpiasam-panjakana 20 000 mahery no tapaka karama
Zava-doza no mitranga amin’ny mpiasam-panjakana amin’izao fotoana izao. Mpiasa miisa 20 000 mahery no tapaka karama amin’ity volana desambra 2017 ity. Nanomboka tamin’ny faran’ny herinandro teo no fandraisana karama ary mitohy amin’izao fotoana izao, nefa dia nanjavona ny karaman’ireto olona ireto. Tototra ny filazana momba izany izahay mpanao gazety. Lazaina fa mpiasam-panjakana matoatoa hono izy ireo. Mpiasam-panjakana miasa ara-dalàna avokoa no tratran’izany raha ny fitarainan’ireo voa. Ny mahagaga dia hatramin’ny tale sy lehiben’ny sampandraharaha no voalaza fa mpiasam-panjakana matoatoa ka izao tapaka karama izao. Ny loharanom-baovao azonay avy amin’ny mpampianatra ao amin’ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena izay misy ny EPP sy CEG ary ny lycée ary miampy ireo mpandraharaha koa, dia miisa 7 000 mahery no tapaka karama tamin’izao volana desambra izao. Avy amin’ny ministeran’ny Asam-panjakana sy ny asa misy 200. Ny avy amin’ny pôlisy, mahatratra 900 no azon’ity fanapahana karama ity koa. Ny avy amin’ny zandary dia voalaza koa fa miisa 1000 no tsy nahazo ny karamany. Ny loharanom-baovao iray avy any amin’ny fiadidiana ny primatiora koa no nahafantarana fa mandrahona mafy ny praiminisitra ny miaramila ao Mahazoarivo ireo izay tsy nandray ny karamany noho ny antony tsy fantatra ity. Milaza fa hanao fihetsehana izy ireo raha toa ka tsy ho azon’izy ireo hatramin’ny alakamisy faha 21 desambra 2017 ny karamany amin’ity volana ity. Milaza koa manaraka izany ny mpiasam-panjakana fa hidina an-dàlambe raha toa ka tsy vitan’ny fanjakana ny mandoa ny volan’izy ireo hatramin’ny faha 24 desambra 2017 izao.
Voalaza fa hanao fanadiovana ny mpiasam-panjakana ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina. Isan’ny lasibatra amin’izany ny mpiasam-panjakana matoatoa. Tsy ireto matoatoa ireto nefa no tapaka karama fa ny olona miasa ara-dalàna. Tsy azo ekena hoy ireto mpiasa ireto ny toa izao satria mahafantatra tsara ny mpiasa iandraiketany ny sampan-draharaha miandraikitra ny mpiasa ao amin’ny ministera satria misy isan-taona ny fanisana ny mpiasa toa izao.
Ny loharanom-baovao hafa indray no milaza fa tsy manam-bola handoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana intsony ny fanjakana izao. Porofon’izany hoy izy ireo ny tsy fahavitan’ny fanjakana nandoa ny fisondrotana karama isan-karazany. Indrindra fa ireo izay mandray “rappel” na ny karama mitambatra amam-bolana maromaro.
Tetika ataon’ny fanjakana tsy handoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana fotsiny izao mba hialana amin’ny filazana fa tsy misy vola intsony ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana.
Eo anatrehan’izany dia efa mifamory ireto mpiasa tsy nahazo karama ireto fa hidina an-dàlambe raha toa ka tsy misy ny vahaolana maika amin’izao raharaha izao.
Tsy voafehin’ny fanjakana tarihin’ i Hery Rajaonari-
mampianina intsony ny fitantanana ny firenena hoy ireto mpiasam-panjakana ireto ka tokony hiala tsy hitondra intsony ny tenany hoy ny feo mandeha etsy sy eroa amin’izao fotoana izao.
Manomboka mandeha koa ny resaka fa tsy maintsy hipoaka ny sarom-bilany.